Kodzero-dzevanhu, 03 Kubvumbi 2017
Muvhuro 3 Kubvumbi 2017
Kubvumbi 03, 2017
VaKasukuwere Voiswa Pakaoma muZanu PF
VaKasukuwere vanonzi nevamwe vavo vari kuronga zvekubvisa VaMugabe pachigaro vachishanda vari muchipoka chiri kudaidzwa kuti Generation 40, kana kuti G40.
MDC-T Inoparura Chirongwa cheTakura Mwana Tiende
Vachiparura chirongwa ichi, sachigaro weMDC T Youth Assembly, VaHappymore Chidziva, vakati vechidiki munyika vanofanira kuvhota kuti vasunungure nyika kubva kuhutongi hwebato reZanu PF.
WFP Yoshandisa Nzira Itsva Inopedza Matongerwo eNyika paNyaya yeChikafu
Sangano reWorld Food Programme rinoti richange rave kuunganidza mari yekubatsira Zimbabwe uye kuendesa chikafu chacho nerubatsiro kuvanhu mbune kuyedza kumisa nyaya yekuita zvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu.
Sarudzo yeBy-Election kuMwenezi East Yosimudza Mutauro
Bato rinopikisa reNational Consitutional Assembly, NCA, rinoti mapepa aro ekutsvaga rudzigiro musarudzo dze by-election mumatunhu anoti Mwenezi East, Gutu Ward 31 neZaka ward 2, ari kubvarurwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZanu PF.
Makurukota Otsvagira VaMugabe Chigaro cheChizvinozvino
Makurukota ehurumende neMuvhuro asvitsa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe zvipo zvekucherechedza bhavhadhe ravo, iro raiveko musi wa 21 Kukadzi pamabiko aitirwa kumuzinda weState House.
Kurume 31, 2017
Zimbabwe Yozeya Zvinoreva Kudzingwa kweMakurukota muSouth Africa
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuSouth Africa zvotyirwa kuti zvinogona kuguma zvobata batawo Zimbabwe mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi, VaJacob Zuma, vavandudza dare ravo remakurukota.
VaTsvangirai Vanopihwa Simba Rekuti Vatsvage Mapato Avanoshanda Vawo
Munyori mukuru webato iri, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio7 mushure memusangano weNational Council yebato ravo kuti VaTsvangirai vapihwa basa rekuti bato iri ribatane nemapato api musarudzo dza2018.
Zec Yokwirirwa Matare
Vakwirirwa dare ndisachigaro we Zec, Amai Rita Makarau, pamwe neboka rehurumende rinoona nezvekutengwa kwezvinhu re State Procurement Board.
Vanhukadzi Vechidiki Vokurudzirwa Kupinda Musarudzo
Sangano reInstitute for Young Women’s Development rinoti riri kushanda nemamwe masangano evechidiki mukukurudzira vanhukadzi vechidiki kumaruwa kuti vatore zvigaro zvematongerwo enyika musaruzdzo dza 2018.
Vanhu Vorwira Zvigaro Mubato raAmai Mujuru
Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reNational People’s Party, VaJealousy Mawarire, vanonzi varova vari kukwikwidza chigaro chekuva munyori webato iri VaGift Nyandoro paBronte Hotel muHarare nemusi weChina
Zvinhu zvaita manyana amire nerongo mubato reZanu-PF mushure mekumukazve kwekunetsana pakati pezvikwata zviviri zvinonzi zviri kurwira kuzotora chigaro chemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa.
Madzishe neMakereke Vofakaza paMhosva Iri Kupomerwa Pastor Mugadza
Hurumende inonzi yadaidza madzishe nevakuru vemakereke kuti vave zvapupu zvinofanirwa kuroverera Pastor Phillip Mugadza pamhosva yavari kupomerwa yekutaura nezvehope dzavanoti vakarota dzekuti mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vachashaya musi wa 17 Gumiguru gore rino.